Bhisma Angdembe - Panchthar-1
दोस्रो संविधानसभामा पाँचथर क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आङदेम्बे संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति थिए ।
वि.स. ०५६ र ०६४ का दुईवटा निर्वाचनमा पराजित भएका आङदेम्बे दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँचथरबाट विजयी बनेका थिए ।
यसपटक उनी एमालेका प्रभावशाली नेता बसन्तकुकार नेम्वाङसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
कांग्रेस नेता आङ्देम्बेलाई पाँचथरवासी एक हक्की, साहसिलो नेताका रुपमा लिन्छन् । उनको जन्म साविक नवमीडाँडामा ०२१ असोज १५ गते भएको हो । कानुनमा स्नातक आङ्देम्बेले प्रारम्भिक शिक्षा नवमीडाँडा, इलाम र भारतको कालेङपुङबाट लिएका थिए ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार आङ्देम्बे राजनीतिक परिवारका सदस्य हुन् । उनका हजुरबा प्रेमराज आङ्देम्बे वीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषदमा थिए ।
आङ्देम्बेको परिवार र राजनीति परिपूरक जस्तै थियो । पञ्चायतका स्थायी सत्रुका रुपमा रुपमा परिवार भएकाले भीष्मराजको राजनीतिक विषयसँग बाल्यकालदेखि नै निकटता रहृयो । उनी १३ बर्षको कलिलो उमेरदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
उनी नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला तह, नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य र तरुण दलका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै हाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा जनजाति विभाग प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।
३ वर्ष जेल र ६ महिना भूमिगत जीवन बिताएका आङदेम्बे ०३४ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् ।